Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. राष्ट्रियताको बिषयमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा नेताहरुको जोड – Emountain TV
राष्ट्रियताको बिषयमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा नेताहरुको जोड
काठमाडौं, २२ कात्तिक । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू भाग देखाइएपछि अहिले नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्शनहरु दिनदिनै भईरहेका छन् । भारतीय कदमविरुद्ध युवाहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने सरकारलाई कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउन चर्काे दवाब परेको छ ।
सीमा विवादले यति चर्काे रुप लिंदा पनि राजनीतिक दलहरु भने अझै एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेतृत्वप्रति पनि जनआक्रोस बढ्दो देखिन्छ ।
भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय भू–भागमा देखाइएको छ । शनिबार यो कुरा सार्वजनिक भए यता दिनदिनै सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
काठमाडौंमा युवाहरुले गरेको सडक प्रदर्शनले विस्तारै देशैभर प्रदर्शन बढ्दैछ । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास घेराउदेखि भारतीय नक्सा सडकमा जलाउनेसम्मका विरोध कार्यक्रमहरु भइरहेको छ ।
भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विरोधमा चर्काे विरोध प्रदर्शन भइरहँदा सरकारका तर्फबाट एउटा विज्ञप्ती जारी गर्ने काम बाहेक नेतृत्व तहबाट खासै उल्लेखनीय काम भएको देखिएको छैन ।
पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर घुमाउरो पाराले दिने बाहेक नेतृत्वबाट पनि खासै गम्भीर्यता देखाइएको पाईदैन । युवाहरु स्वतस्पूmर्त रुपमा सडक आन्दोलनमा होमिरहँदा शीर्ष नेतृत्व तह एक ठाउँमा बस्न सकेका छैनन् ।
नागार्जूृनबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले केही बोल्दा बालुवाटारमा संघीयता संकटमा पर्यो भनेर सर्वदलीय बैठक बस्ने नेताहरु अहिले नेपालको सीमा नै मिचिएर छिमेकी देशले नक्सा निकाल्दा संयुक्त बैठक बस्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रतक्ष्य प्रभाब पर्ने भएका कारण पनि दलहरु एक ठाउँमा उभिएर भारतलाई दवाब दिनतर्फ लाग्न नसकेको राजनीतिक दलहरुको बिश्लेषण छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने सरकारको कमजोरीका कारण यो अवस्था श्रृजना भएको बताउँछ ।
भारतले गरेको नेपाली भूमी अतिक्रमण बिरुद्ध सवै दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने हो तर उभिन सकिरहेका छैनन् । यसको नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्ने समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको सुझाव छ ।
स्वयम् नेकपाका नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीले यस बिषयमा अबिलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्रकोे सार्वभौमिकता अखण्डताका सवालमा सम्पुर्ण नेपाली एकठाउँमा उभिनुपर्ने आजको आवस्यकता रहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुसँग बार्ता गरी भारत सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सुझाब छ ।
नेपाल भारत बिच सदियौंदेखि सम्बन्ध छ । नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत नै हो । रोटी बेटीको सम्बन्धले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई थप नजिकाएको छ ।
नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार भारतसँगै छ । नेपाललाई तीन तिरबाट भारतले नै घेरेको छ । तर त्यही नजिकको भनिएको भारतले नेपालको सीमा पटक पटक मिच्दै आएको छ ।
भूगोल त मिचेको छ नै अहिले त नक्सा नै बदल्न खोजेको छ । नेपालको भूभाग नै भारतीय नक्सामा देखाइएपछि युवाहरु त सडक आन्दोलनमार्फत विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु अब एक ठाउँमा बसेर समस्याको निकास खोज्न लाग्ने कि नलाग्ने ? कि सत्ता कस्को नेतृत्वमा हुने भनेर मात्र छलफलमा लाग्ने ? आम नेपालीको मनमनमा प्रश्न उठिरहेकोछ ।
यसैबीच नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार ४ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ ।